Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay arin ka farxisay Shaqaalaha Dowlada | TOP NEWS
Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay arin ka farxisay Shaqaalaha Dowlada
By Tifaftiraha Somalida Maanta on April 17, 2017 No Comment
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaale Beyle oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay shaqaalaha Dowladda Federaalka in ay si rasmi ah u heli doonaan Mushaarkooda bil kasta.
Wasiirka ayaa sheegay in aysan dhici doonin in shaqaalaha Dowladda ay shaqeeyaan iyaga oo aan qaadan wax mushaar, isaga oo tilmaamay in Dowladda ay ku dadaaleyso sidii ay shaqaalaha Dowladda u heli lahaayeen Mushaarkooda.
Sidoo kale C/raxmaan Ducaale Beyle Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegay shaqaalaha Dowladda in la siin doono Mushaaraadkii ka maqnaa bilihii la soo dhaafay.
Wasiirka ayaa ugu dambayn sheegay in dalkeena uu aad uga hooseeyo wadamada Africa, sidaas daraadeedna looga baahan yahay shaqaalaha Dowladda in ay xooga saaraan sidii dalku dib ugu soo kaban lahaa, sanadka aakhirkiisana laysla xisaabtamo si dhaqaalaheenu u noqdo mid horumar sameeya.
Wasiirka Maaliyada oo ka hadlay arin ka farxisay Shaqaalaha Dowlada added by Tifaftiraha Somalida Maanta on April 17, 2017